ESI EWEPỤ IHE MKPOFU SITE NA DESKTỌỌPỤ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ya na Windows 7 ma ọ bụ 8 (Echere m na otu ihe ahụ ga-eme na Windows 10), ma n'otu oge ahụ wepu ụzọ mkpirisi si na desktọọpụ, ntụziaka a ga-enyere gị aka. Omume niile dị mkpa ga-ewe nkeji ole na ole.
N'agbanyeghị eziokwu na ndị mmadụ nwere mmasị ịmepụta nkata ahụ, a gaghị ehichapu faịlụ ndị dị n'ime ya, echeghị m na ọ dị mkpa: na ụdị nke ị nwere ike ihichapụ faịlụ na enweghị itinye n'ime nkata, jiri kọntaktị Ntugharị + Shift Hichapụ. Ma ọ bụrụ na a na-ewepụ ha mgbe niile, otu ụbọchị, ị nwere ike ịkwa ụta banyere ya (enwere m onwe m karịa otu ugboro).
Anyị na-ewepu nkata na Windows 7 na Windows 8 (8.1)
Nzọụkwụ achọrọ iji wepụ akara ngosi akara na desktọọpụ na nsụgharị ọhụrụ nke Windows anaghị adị iche, ma ọ bụrụ na interface ahụ dịtụ iche, ma ihe kachasị mkpa bụ otu ihe ahụ:
Right-click na ebe efu na desktọọpụ ma họrọ "Nhazi". Ọ bụrụ na enweghị ihe dị otú ahụ, mgbe ahụ, isiokwu ahụ kọwaa ihe ị ga-eme.
Na nhazi Windows Personalization na ekpe, họrọ "Gbanwee Oyiyi Desktọpụ".
Mgbe ị pịa "Ok", nkata ga-apụ (ma ọ bụrụ na ị kwụsịghị nhichapụ faịlụ n'ime ya, nke m ga-ede n'okpuru, ha ka ga-ehichapụ na nkata, ọ bụ ezie na anaghị egosipụta ya).
Na ụfọdụ nsụgharị nke Windows (dịka ọmụmaatụ, mbipụta mbụ ma ọ bụ Home Basic), ọ dịghị ihe "Nhazi" ihe na nchịkọta nhọrọ nke desktọọpụ. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ịnweghị ike iwepu nkata. Iji mee nke a, na Windows 7, na igbe nchọta nke "Malite" menu, malite ịpị okwu "Iyi" ma ị ga-ahụ ihe "Gosi ma ọ bụ zoo akara ngosi na desktọọpụ."
Na Windows 8 na Windows 8.1, jiri nchọta na ihuenyo mbụ maka otu ihe ahụ: gaa na ihuenyo mbu, ma ọ bụrụ na ịhọrọghị ihe ọ bụla, ịmalite ịpị "Oyiyi" na keyboard, ị ga-ahụ ihe achọrọ dị na nsonaazụ ọchụchọ, ebe enwere ike iwepu ahịhịa.
Gbanyụọ kichin egweri (nke mere na faịlụ na-ehichapụ kpamkpam)
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nkata ahụ apụtaghị na desktọọpụ, mana faịlụ anaghị adaba na ya mgbe ịhichapụ ya, ịnwere ike ime nke a dị ka ndị a.
Pịa aka nri na akara ngosi akara, pịa "Njirimara."
Lelee igbe "Wepụ faịlụ ozugbo imichapụ ya, na-enweghị etinye ha na ahịhịa."
Nke a nile, ugbu a ehichapụ faịlụ enweghi ike ịchọta na nkata. Ma, dị ka m dere n'elu, ị ga-akpachara anya na ihe a: enwere ohere ị ga-ehichapụ data dị mkpa (ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị gị onwe gị), mana ị gaghị enwe ike iweghachite ha, ọbụnadị site n'enyemaka nke mmemme mgbake data (karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere diski SSD).